Fanafihan-jiolahy: Dimy lahy nandroba « épicerie » tao Arivonimamo, voasambotra tany Ankadinondry Sakay
Toeram-pivarotana enta-madinika iray tao Arivonimamo no notafihin’ny jiolahy miisa dimy, nitondra fitaovam-piadiana ny alarobia 23 oktobra 2019 tokony ho tamin’ny 5ora hariva. Noraofin’izy ireo ny entana mora entina sy maivana toy ny sigara, finday miarana amin’ny fahana ary vola 2 080 000 Ariary, dia rifatra nitsoaka izy ireo.
Vao nahazo fampandrenesana ny Zandary avy amin’ny « Brigade territoriale » Arivonimamo dia nanao fanarahan-dia avy hatrany amin’izay lalana noheverina fa nitsoahan’ireo olon-dratsy, nampiasa moto, ary nampilaza ireo Zandary manodidina.
Sarona nandritra ny fisavana fiara mampitohy an’Analavory amin’i Tsiroanomandidy, teo amin’ny sakana nataon’ny Zandary avy amin’ny brigadin’Ankadinondry Sakay izy dimy lahy, niaraka tamin’ny ambin’ny entana sy vola halatra. Nakarina nankao amin’ny brigady Arivonimamo izy ireo natao famotorana.